Who were Bengali, so called Rohingya?: ရိုဟင်ဂျာရဲ့နောက်ကွယ်မှာ..ဘာတွေရှိလဲ
1. ရိုဟင်ဂျာတွေ နောက်ကွယ်မှာဘာအဖွဲ့အစည်းတွေရှိလဲဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းသတိပြုဖော်ထုတ်ရမယ်။ အဓိကက အကြမ်းနည်းပိုင်းမှာ အယ်ခိုင်ဒါ နောက်ကွယ်မှာ ရှိသလို အနုနည်းအပိုင်းမှာ အာရပ်အဖွဲချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံထဲကို ထိုးဖောက်လွမ်းမိုးနိုင်ဖို့ ကြိုက်သလောက်သုံး ရန်ပုံငွေ ပုံအောထားတဲ့ နောက်ကွယ် လျို့ဝှက်အစီအစဉ်တွေ ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ အရှေ့တောင်အာရှ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေရဲ့ အင်အားအကြီးဆုံး၊ အခိုင်အမာဆုံး ရှေ့တန်းအကျဆုံးံခံတပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆီသို့ အာရပ်ကမ္ဘာရဲ့ ပထမဆုံး သွေးတိုးစမ်းတိုက်စစ်ပဲ။( Thi Ha )
ကိုစိုးမြတ် ခင်ဗျားပြထားတဲ့လင့် http://bit.ly/qnnbD5 က 2001 မတ်လ ဆိုတော့ WTC 9/11 တောင် မဖြစ်သေးဘူး..။ အပေါ်က wikileaks ကြေးနန်းက WTC ကိစ္စပြီးတော့ 2002 ခုနှစ် မှ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး အတွက်အမေရိကန်အစိုးရကိုတင်ပေးတဲ့ကြေးနန်းပါ..။ နေ့စွဲတွေကို သေချာကြည့်ဦး တွေ့ကရာ လျှောက်ရေးနဲ့ အဲဒါကြောင့် အခု ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှု
တွေကို အမေရိကန်အစိုးရက ထောက်ခံလို့လား..။ သူတို့က ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း 2002 ခုနှစ်ကတည်းက သိနေတာ၊ မြန်မာအစိုးရကလည်း သိပြီးသားတာကြာနေပြီ.. ။ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ခေါင်းစဉ်တပ်ထားလို့သာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို နေထိုင်ခွင့်ပေးမှာ ..။ သူတို့က CIA ထက်တောင် ပိုသိရင်သိဦးမယ်..။
ခင်ဗျားပြတဲ့ လင့်က အလကားပဲ
wikeleaks ထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစ
ည်းမှာ ပါတယ်လို့မပြောဘူး .. ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ အာရပ်ကွန်ယက်တွေ၊ အယ်ကိုင်းဒါးတွေ၊ ငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေ အားလုံး ပတ်သတ်ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြထားတာ..။ သေသေချာချာဖတ်ဦး..။
အရင်တုန်းက အမေရိကန်က မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအရ အဆင်သာပြေခဲ့မယ်ဆိုရင်
ခင်ဗျားပြတဲ့ လင့် http://www.state.gov/s/ct/rls/other/des/123085.htm
ထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာ.. နာမည်ရောက်နေတာကြာပြီ..။ ( Yan Aung )
မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးတယ်ဆိုတဲ့ ဒေါက်တာ အူဒင် ဒေါက်တာဘွဲ့ရပြီး မြန်မာစကားကို တတ်အောင်လုပ်ထားခိုင်းစေချင်ပါတယ်
ရခိုင်မှာအဲဒီအချိန် ဘာဘုရင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တာတောင်မသိပါလား ၊ပြောပြရမှာလား
ARNO / RSO /ARIF အဖွဲ့ရဲ့ အဆက်အနွယ်တွေက တဖြည်းဖြည်း ညံ့လာပါလား
အခုထုတ်လွှင့်ပးနေတဲ့ သတင်းဌာနများအနေနဲ့ ယခင် တာလီဘန်ကိစ္စတွေကိုသိမှာပါ..။ခိုင်မာတဲ့ အထောက်အထားတွေအရ
အမေရိကန်အာဖဂန်ကိုဝင်တိုက်တော့ အဲဒီရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်တွေပဲ အာဖဂန်ဘက်က၀င်ကူခဲ့တာပါ၊
ပါကစ္စတန်နယ်စပ်ကနေ ဖြတ်ကျော်ပြီး အာဖဂန်ကို တပ်စုတပ်ခွဲအလိုက်သွားကြတာပါ၊ ပြန်လာတော့ လူတော်တော်များများကျန်ခဲ့ပါတယ်။
AL-QUADA တို့ ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြည်သူတွေထိတ်လန့်ခဲ့ဖူးတဲ့ (JMB)အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ
ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်တွေဆိုတာ …..ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံရဲ့ အစိုးရလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဖြစ်တဲ့
(BDR-Bangladesh Rifle နယ်ခြားစောင့်တပ်) (BIR ခြေလျှင်တပ်)နဲ့ (RAB-Rapid Action Battalion လျှပ်တပြက်တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့)တွေ က ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းအားလုံးသိပါတယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ် သြဂုတ်လ အတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာ တရက်တည်းနဲ့ ခရိုင် (၆၃)ခရိုင်ရဲ့မြို့ ၃၀၀ လောက်မှာဗုံး အလုံးပေါင်း ၅၀၀လောက် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တာ (JMB) အဖွဲ့လက်ချက်ဖြစ်ပါတယ် အဲဒီတုန်းကသူတို့နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ တွေကိုပါ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရတပ်တွေက ဆက်တိုက်နှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်၊
ယခင် အင်္ဂံလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲမှာအာသံ+မဏိပူရကို ပေးခဲ့ရတာ မြန်မာစစ်ရှုံးလို့ မြန်မာဘုရင်ကိုအင်္ဂလိပ်ကတောင်းခဲ့လို့ပါ အဲဒီတုန်းကတည်းကအင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကအဲဒီဒေသတွေ ဘယ်သူပိုင်တယ်ဆိုတာသိခဲ့လို့ပါ
စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလရဲ့ ပန်းဝါတိုက်ပွဲ ဟာ အခုရိုဟင်ဂျာအမည်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေတောင်းဆိုနေတဲ့ ဒေသတွေမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေပါ
ကျွှန်တော်မေးချင်ပါတယ် ၊ အဲဒီတုန်းက ဘယ်ရိုဟင်ဂျာသူရဲကောင်းပါပါသလဲ၊မကြားဖူးပါ၊မလေ့လာဖူးပါ
စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလက တကယ်ဆိုအနေသာကြီးပါ၊ သူ့နေပြည်တော်က မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းမှာပါ။
ဒီလောက်ဆို ဒေါက်တာအူဒင်တို့ သဘောပေါက်သင့်ပါပြီ.. ။ ဒီထက်ပို တောင်းဆိုလာမယ်ဆိုရင်. .ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ခြေလှမ်းတွေတို ဓာတ်ပုံ အပါအ၀င် အထောက်အထား၊ အစရှိသဖြင့် ထုတ်ပြပါ့မယ်..။
ဒီ COMMENT ကို လွပ်လပ်တဲ့အာရှအသံ မှာဖေါ်ပြပေးစေလိုပါတယ်၊ စိစစ် ဖြတ်တောက်စရာ ဆဲဆိုပုတ်ခတ်တာမပါပါ၊ (ဒါပေမယ့် ဖော်ပြမည်တော့မထင်ပါ ) (လေ့လာသူတစ်ဦး၏ mail ပို့ချက်အား ကူးယူဖော်ပြပါသည်၊) ( Yan Aung )
ကြယ် စင် လင်း FB မှကူးယူဖော်ပြသည်။
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 6:06 PM